जर्मनी मा वास्तविक समय
आकर्षित धेरै पर्यटक मात्र जर्मन बियर र, तर पनि यो भव्य भवन गोथिक शैली, छ जो संरक्षित मूल वास्तुकला । छन् धेरै अचम्मको तथ्य बारे यो देश उदाहरणका लागि, यो पोस्ट कार्यालय, आधा एक लाख कर्मचारीहरु सबै दुनिया भर देखि, पत्र र स्थानीय बासिन्दा प्राप्त पछि अर्को दिन, तिनीहरूले छन् पठाए । केही मानिसहरू थाह छ कि जर्मनी छैन सजाय भइरहेको को लागि एक जेलमा भाग्ने, यहाँ यस्तो कार्यले छन् पूर्णतया न्यायसंगत मानव इच्छा हुन.
के अधिक सत्तरी स्थानीय बासिन्दा यात्रा गर्न रुचि, यो परिवहन, त्यसैले म बाहिर पार्किंग, र पनि यातायात रोशनी को लागि तिनीहरूलाई छ । रुचि हुनेछ थाह बियर प्रेमीहरूले, कि जर्मनी मा एक व्यवस्था अन्तर्गत जो कम्पनीहरु विनिर्माण उत्पादन, गर्न सक्छन् छैन मा प्रयोग को उत्पादन, तर केही पानी, जौ र खमीर, शायद किन कि जर्मन बियर को एक छ. नेताहरूले स्वाद । जर्मन र आदर परम्परा को आफ्नै मान्छे, तिनीहरूले धेरै सावधान सबै संग र खुशी हेर्न आफ्नो देश मा विदेशीहरू.
शहरी क्षेत्रमा एक वेब क्यामेरा संग, तिनीहरूलाई, इन्टरनेट सेवा प्रत्यक्ष प्रसारण साइटहरु
घडी क्यामेरा अनलाइन सक्छ कुनै पनि प्रयोगकर्ता को नेटवर्क । क्यामेरा छवि प्रसारण घडी वरिपरि, पर्याप्त छ, एक राम्रो नेटवर्क जडान । देश मा गुणवत्ता मात्र बियर, तर ट्याप पानी छ कि कुनै आवश्यकता छ उमालेर वा फिल्टर.
यो राष्ट्रको मनिटर यसको आफ्नै स्वास्थ्य ।
← मुक्त डेटिङ मा चित्र सम्पर्क अनुभव - अब नि: शुल्क डाटा